यसरी छायांकन हुँदैछ, नालापानी ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > यसरी छायांकन हुँदैछ, नालापानी !
यसरी छायांकन हुँदैछ, नालापानी !
June 13, 2018 Nepali
ऐतिहासीक चलचित्र नालापानीको यतिबेला धमाधम छायांकन भैरहेको छ । नालापानी टिम एक हप्ता देखी चितवनको उपरदाङ्गगडीमा छायांकनमा ब्यस्त रहेको छ । चलचित्रका निर्देशकका अनुसार यो टिम अझै एक हप्ता उपरदाङ्गगडीमै रहने छ ।
२०७६ सालमा प्रर्दशन गर्ने लक्ष्य लिईएको यो चलचित्र चितवन उपरदाङ्गगडीको छायांकन सकिएपछि ९० प्रतिशत छायांकन सकिने निर्माण पक्षले बताएको छ ।
समुन्द्री सतह देखी १२७५ मिटर उचाईमा रहेको यो गडी कुनै एक समय चितवन जिल्लाको सदरमुकाम रहेको बताईएको छ ।
बाईसे चौबीसे राज्यलाई एकिकरण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहका नाती बहादुर शाहका छोरा शत्रुभञ्जन शाहले उपरदाङ्गगडीको निर्माण गरेको भन्ने ईतिहास रहेको छ । सन १८०० मा नेपाली भुमि रक्षा गर्नको लागी यो गडीको स्थापना गरीएको बताईएको छ ।
मनोज शाक्य निर्माता रहेको यो चलचित्रलाई रिमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका छन् ।
चलचित्र नालापानी निर्माणमा नेपाल आर्मीको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको छ ।
१८१४ मा ब्रिटिस साम्राज्य सँग नेपालले गरेको युद्धको विषयमा निर्माण भैरहेको नालापानीमा अर्जुन जंग शाही,देशभक्त खनाल,देब गुरुङ्ग,मनोज शाक्य,विजय बिस्पोट,विशाल पहाडी,पुजना प्रधान,गिता अधिकारी,जनक बर्तौला लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।